That's so good, right?: Bored
ကျွန်တော်က အလွန်တရာကြီးမားလှသော ကုမ္ပဏီရုံးအဆောက်အဦးကြီးတစ်လုံးအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ အကန့်လေးပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသော ခုံနေရာတွေထဲက အကန့်ငယ်လေးတစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှေ့မှာ နေ့တိုင်း စာလေးရိုက်လိုက် E-mail လေးပို့လိုက်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀က စိတ်လှုပ်ရှားစရာလုံးဝမရှိ အချိုးအကွေ့ သိပ်မရှိပါဘူး။ နေ့တိုင်း အိပ်ယာကထတယ် မနက်ခင်းတိုင်းလုပ်နေကြ Routine အတိုင်းလုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာတွေ လုပ်တယ်… အလုပ်သွားတယ်….နေ့လယ်စာစားတယ်….အလုပ်ပြန်လုပ်တယ်….အိမ်ကိုပြန်တယ်…ညစာစားတယ်….ပြီးတော့ အိပ်ယာထဲမ၀င်ခင် ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက်ကြည့်ပြီး လက်သမားလုပ်တယ်လေ။ ကျွန်တော့်ဘ၀ နေ့နဲ့ညတွေဟာ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတာ များ ကောလိပ် တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်ဘ၀တုန်းကလိုမဟုတ် သောက်ရမ်း အေးစက်နေပြီ။ သူဌေးကတော့ ပြောပါတယ် မင်း နယ်တွေက ဖောက်သည် ကုန်သည်ကြီးတွေနဲ့ သွားတွေ့ ပြောစရာရှိတာပြော ဆွေးနွေးစရာရှိတာဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်ဖို့တော့ ပြောထားတယ်။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော့်ကိုမှသူ ရွေးချယ်ပြီးခိုင်းသလည်းဆိုတာ အခုထိတော့မသိသေးပေမယ့် အချိန်တန် အစည်းအဝေးပွဲလေးလုပ် ဖင်ကျောက်ချပြီး ရုံးခန်းထဲထိုင်နေရတာထက်စာရင်တော့ ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါ။ ကဲဒီတော့လည်း အခုနေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ပထမမြို့တော်ကနေ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မြို့တော်ကြီးတွေဆီသွားဖို့ အ၀တ်အစား အထုပ်အပိုးတွေ ပြင်ဆင်လိုက်ကာ လေယာဉ်ကို သုံးလေးနာရီမကစီးရင်း ခရီးထွက်လိုက်ပါတယ်။
အင်း…မြေပြင်ပေါ် ရောက်ရောက်ခြင်း `သန့်စင်ခန်းဘယ်နားမှာရှိလဲဗျ?’ ‘ ‘ဒါဘယ်လောက်ကျသလဲဗျ?’ ‘ဘယ်နားမှာ စားသောက်ဆိုင် ရှိလဲ?’ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ဒေသိယလေသံနဲ့ပြောဆိုတတ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့တွေးမိပါတယ်။ ခရီးမထွက်တာကြာပြီဆိုတော့ လူအများနဲ့ ကွဲပြားနေတဲ့ပုံစံဟန်တွေဖြစ်မနေချင်ဘူးလေ။ လေဆိပ်ကနေ တက္ကဆီငှားကာ သူဌေးငှားပေးထားတဲ့ ဟိုတယ်ခန်းရှိရာကို သွားလိုက်ပါတယ်။ ဟိုတယ်က ၀န်ဆောင်မှုက သိပ်မဆိုးပါဘူး ဒါပေမဲ့ လူတော့ နည်းနည်းရှုပ်သလိုပဲဗျာ။ အခန်းထဲမှာတော့ ပရိဘောဂ နည်းတယ် ခုတင်တစ်လုံး၊ အ၀တ်ချိတ်စဉ်ပါတဲ့ ဘီရိုတစ်လုံး၊ ရေပန်းပါတဲ့ ရေချိုးခန်းတစ်ခန်းလောက်ပဲ။ ပါလာတဲ့အထုပ်အပိုးတွေကို နေရာချပြီးနောက် အ၀တ်တွေလဲလှယ်လိုက်ကာ ရေချိုးခန်းဝင်လိုက်ပါတယ်။ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ အချိန်တော်တော်ကြာအောင်ချိုးပစ် လိုက်တယ် ဒီတစ်ပါတ်တော့ အရင်ရက်သတ္တပါတ်တွေလိုမဟုတ် ကွဲပြားပါရဲ့။ အခုထိတော့ ပျော်စရာဘာမှမရှိသေးတဲ့ ရက်သတ္တပါတ် ဖြစ်နေသေးပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံး ခြောက်သွေ့အောင်တဘက်နဲ့သုတ်ကာ မွှေးပျံ့အောင်လုပ် ချောင်ချောင်ချိချိအ၀တ်အစားဝတ်ပြီး ခုတင်ပေါ်တက်ကာ ခဏဆိုပြီးလှဲလိုက်တာ လုံးဝအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက် နိုးထလာသောအချိန်မှာတော့ လတ်ဆတ်လန်းဆန်းနေတာများ နောက်ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ရ သလိုပါ။ ဟိုတယ်တွင်းဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ပြီး တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းကို `ကျွန်တော့် Boss ဖုန်းခေါ်တယ်ဆိုရင် သူပြောတဲ့ ကုန်သည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လုပ်ထားတာ ပျက်သွားပြီဆိုတာပြောပေးနော်´လို့မှာထားလိုက်တယ်။ သူဌေးက သူ့တူမလေးနဲ့တွေ့စေချင်တာ ရော သူမရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို ပေးစေချင်တာရောကြောင့် ကျွန်တော့်ကိုလွှတ်လိုက်မှန်းအခုမှသိတာ။ အခုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အလည်အပတ်ခရီးတစ်ခုကိုဖြစ်လို့။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဖုန်းခွက်ကိုချလိုက်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ထပြီးကမိ ပါရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လွတ်လပ်သွားသလိုခံစားရတာကြောင့်ရော အလုပ်တွေကနေ ခဏကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီး အနားယူရမှာကြောင့်ရောပေါ့။ ဒီနေ့က နေသာနေတဲ့ တော်တော်လှတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်နေတာ ကံကောင်းတယ်ဗျ။ လှပသော ဖွံ့ဖြိုးခေတ်မီနေသော မြို့အနှံ့ အလည်ထွက်ရမယ်။ ရောက်နေတဲ့ မြို့တော်က တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖက်ရှင်မြို့တော်တစ်ခုအဖြစ် နာမည်ကျော်နေတာကြောင့် အားလပ် ရက်လေးရတုန်း ဘယ်လို ဖက်ရှင်အလန်းစားတွေခေတ်စားနေလည်း လေ့လာရတာပေါ့။
အနောက်တိုင်းဖက်ရှင်များနှင့်အတူ ရိုးရာဖက်ရှင်ကို ဆန်းပြားစွာ ဖန်းတီးတတ်သောမြို့ကလေးတဲ့လေ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးဝတ်ဆင် ဘေးလွယ်အိတ်ထဲ ပိုက်ဆံအပြည့်ဖြည့် ပြီးသကာလ လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့နောက် တွေ့လိုက်ရတာက အမှတ်တရ တီရှပ်လေးတွေ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအသေးစားလေး တွေ၊ လက်မှုပစ္စည်းအသေးလေးတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်တရ တီရှပ်တစ်ထည် အရောင်လှလှလေးတစ်ထည်ဝယ်လိုက်ကာ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်း ဟိုဟိုသည်သည်ဝယ်လိုက် ပါတယ်။ လူတွေနည်းနည်းများတဲ့ဘက်ကိုရောက်တော့ နာရီကိုကြည့်လိုက်တာ နေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်နေတာကြောင့် နေ့လယ်စာ စားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရဲ့။ ထုံးစံအတိုင်း ရောက်ရှိဒေသရဲ့ ဒေသအစားအစာတွေကိုမြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဟိုသည် ကြည့်လိုက်တော့ စားသုံးသူကျနေတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုမြင်တော့ စူးစမ်းလိုက်တာ ကျွန်တော့်ကို စူးစမ်းနေတဲ့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို သတိပြုမိလိုက်ပါရော။ တစ်ယောက်ကတော့ မဲနက်တောင်ပြောင်သောဆံနွယ်တွေနဲ့ အသားဖြူဖြူကောင်မလေးရယ် ပြီးတော့ ဆံပင်အညိုဖျော့နဲ့ ပထမတစ်ယောက်ထက် နုညံ့ပုံပေါ်တဲ့ကောင်မလေး။ နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ တကယ့်ငထွားတွေပဲဗျ.. ထွားကြိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အပြိုင် ရင်သားတွေကလည်း အယ်နေတာပဲ။ ဒီလို ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ညီဘွားလေးကိုနှစ်သိမ့်ဖို့ အဖော် ရှာတဲ့အကျင့်မရှိတာကြောင့် ဘာလဲ ညာလဲစူးစမ်းမနေဘဲ သူတို့ကိုအပြုံးတစ်ချက်သာပေးလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ သူတို့ကိုအထာပေး တယ်လို့ သဘောယူသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ ကျွန်တော့်ကို စကားလာစပြောတယ်ဗျ။
`မင်္ဂလာပါရှင့်….အဖော်ပါလားဟင်?’ ပထမတစ်ယောက်က ခပ်တိုးတိုးမေးပါတယ်။
`အဖော်မလိုဘူးနဲ့တူတယ်…´ ဒုတိယတစ်ယောက်က ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ မှတ်ချက်ဝင်ပေးသလိုနဲ့ ပထမတစ်ယောက်ရဲ့စကားကိုဖြတ် တောက်လိုက်ပါတယ်။
`ဆောရီးပါရှင်…သူ နည်းနည်းသောက်ထားလို့´ သူမစကားပြောပုံက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟန်မဟုတ်ဘူး နည်းနည်းလေးနေသလိုပဲဆိုတော့ အင်းပါလေ…ဒီလိုပဲဆိုပြီး နားလည်လိုက်ပါတယ်။ `စကားမစပ်…..ကျွန်မ နာမည်က မျိုးမျိုး၊ ပြီးတော့ သူက လှလှပါ။ ရှင် တစ်မြို့လုံး ဟိုသည်သွားချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလား။ ဘယ်နေရာက ဘယ်လို ဘယ်စားသောက်ဆိုင် ဘယ်အမှတ်တရဆိုင်က ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ညွှန်းပေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်´။ သူတို့ကိုကြည့်ရတာ လှတပတ ညမွှေးပန်းတွေပုံစံပေါ်ပေမယ့် အထာသိပ် မညံ့တဲ့ စော်တွေဖြစ်နိုင်တယ် ကျွန်တော် အားလပ်ရပ်မှာ အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေရနိုင်တာပေါ့။
`အာ…ဒါဆို မိုက်တာပေါ့….ကျေးဇူးပဲဗျ´ ကျွန်တော်စားသောက်တာကို ပိုက်ဆံရှင်းလိုက်သလို သူတို့စားသောက်တာကိုလည်း သူတို့ ဖာသာပိုက်ဆံရှင်းလိုက်ရင်း ဆိုင်ထဲကနေထွက်လာလိုက်ကြတယ်။ မျိုးမျိုးက ခရီးစဉ်တွေပြောပြပြီး ရှေ့ကနေဦးဆောင်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်း ခပ်ဖြေးဖြေးလျှောက်လိုက်သွားရော။ Versace နဲ့ Prada လို ဆိုင်အနည်းငယ်လောက်ကိုပဲပြပြီး လမ်းပဲလျှောက်နေ ကြတာဆိုတော့ သိလိုက်ပြီ ကျွန်တော်တို့ ကစားလို့အဆင်ပြေမယ့် ဈေးပေါတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုခုကို သူတို့ရှာနေကြတာပဲဖြစ်မယ်လို့။ ညဦးပိုင်းလေးကို အချိန်ဖြုန်းဖို့ဆိုရင် တော်တော်တော့နောက်ကျနေပြီဗျ သူတို့သွားနေကျ ဈေးပေါဟိုတယ်ကိုရှာတွေ့ချိန်မှာတော့။ ဟိုတယ်လေးကိုကြည့်ရတာ ကြယ်ငါးပွင့် ကြယ်ပွင့်သတ်မှတ်ဖို့နေနေသာသာ ဟိုတယ်အမည်ခံပုံစသက်သက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒီအတိုင်း သူတို့ဝင်သွားတယ် ဘာမှမပြောဘူးဗျ။ ကောင်တာက စာရေးကို တစ်ခုခုပြောတော့ သော့တစ်ချောင်းကိုထုတ်ပေးရော။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ဘာလည်းမသိ တစ်ချက် တစ်ကိုယ်လုံးကြည့်သေး။ သူတို့အခန်းကြီးတစ်ခုရှေ့ရောက်တော့ တံခါးကိုသော့ဖွင့် ၀င်လိုက်ကြတယ်။ အခန်းက နည်းနည်းမှောင်တယ် အလင်းရောင်တောင်သိပ်မရှိဘူးဗျာ။ ၀င်ပေါက် နံရံဘေးမှာ ခလုပ်တစ်ခုတွေ့တာ ကြောင့် ကျွန်တော်မီးဖွင့်လိုက်တော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းရုပ်ရည်နဲ့ ဘဲနှစ်ပွေ အခန်းအလယ်မှာရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ခဏနေက စော်နှစ်ပွေကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ တံခါးကိုပိတ်ပြီးသော့ခတ်နေပြီ။ သူတို့ဘာလုပ်ကြမှာလည်း ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့ အဓိကပွိုင့်ကို ကျွန်တော်တွေးမရတော့ဘူး။
`ရှင်က ကျွန်မတို့ကို တခြားမိန်းမပျက်တွေလိုပဲလို့ထင်နေတာလား? ကျွန်မတို့အဲ့လောက် မရူးနှမ်းသေးဘူးရှင့်..ဟဲဟဲ။ ရှင့်လို အရူးလေးတွေကို ဒီက အကိုကြီးတွေဆီခေါ်လာပေးဖို့ ပိုက်ပိုက်ယူထားတာ။ ရှင်ပျော်ရမှာပါလေ´ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ဘာစကားလုံး တစ်လုံးမှ မထွက်နိုင်သေးခင် ကျွန်တော့်နောက်နားဆီက ဘဲတစ်ပွေရဲ့ ဒေသိယစကားသံဝဲ၀ဲနဲ့ မျိုးမျိုးကိုလှမ်းပြောလိုက်သံကိုကြားလိုက် ရပါတယ်။ သူ့အသံကြားရတာ မျိုးမျိုးက သူ့ကိုနည်းနည်း အလှည့်အပတ်လုပ်လို့စိတ်ခုသွားသံလိုလိုပါပဲ။ ဘာကြောင့်သိလဲဆိုရင် သူက ကျွန်တော့်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီးပြောပြောနေတာကိုး။ သူ့အတွက် သဘောကျစရာ ရုပ်ရည်မျိုး ကျွန်တော်မပိုင်ဆိုင်လို့များလားဆိုတဲ့ စိတ်ကလေး ဖျတ်ကနဲတော့ဝင်မိရပါတယ်။ အဲ့လူ ကျွန်တော့်ဘက် မျက်နှာမူလာပြီး ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ စကားသံပီပီသသနဲ့ပြောပါ တယ်။
`ဒီနေရာကို ခင်ဗျား ဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲသိလား?’
‘မသိဘူးဗျ၊ ကျွန်တော် ဒီနေရာကနေ ပြန်ချင်ပြီ´
`သူတို့က ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုခုလုပ်ကြမယ့်ကိစ္စတစ်ရပ်အတွက် ခေါ်လာတာ၊ ခင်ဗျားကို သူတို့က gay လို့ထင်ကြ တာလေ´
`အာ….ကျွန်တော် မဟုတ်ရပါဘူး၊ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော် ကျွန်တော် ထွက်သွားလို့ရပြီလား´
ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ ကျွတ်ကြဲစပြုလာပြီ။ ကြောက်စိတ် နည်းနည်းလေးဝင်လာတော့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းအဖျားလေးတွေတောင် တဆတ်ဆတ်ခါစပြု လာတယ်။
`မရတော့ဘူး….အခုအချိန်မှ တစ်ယောက်ယောက်ကို ထပ်ရှာဖို့ဆိုတာ နောက်ကျနေပြီ။ အခု ခင်ဗျား….နဲ့ပဲ…´ သူ ကျွန်တော်ရှိရာကို တည့်တည့်လှမ်းလာပါတယ်။ ကျွန်တော် တံခါးမရှိရာကို ခြေလှမ်းဖို့ပြင်တော့ သူ လမ်းပိတ်ရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ပခုံးတွေကိုဆွဲကိုင်ပြီး ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းရှိုက်ပါရော။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာ အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းလောက်အောင် နုညံ့ပြီး ငြင်သာပါရဲ့။ ယောက်ျား တစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မထားပါဘူး။ ကျွန်တော် သူ့ပခုံးတွေကိုပြန်တွန်းပြီး ထွက်သွားဖို့ထပ်ကြိုးစားပေမယ့် သူက တံခါးလော့ခ်ျရှိရာဘက်ခြမ်းမှာ ဖိကပ်ပြီးရပ်ကာ ကျွန်တေ်ာ့ကိုယ်လုံးကို ထွေးဖက်ဖို့ကြိုးစား ပါတယ်။ ကျွန်တော် အံ့အားသင့်ပြီး ခဏငြိမ်သွားတဲ့ခဏ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အကျ င်္ီ၊ ဘောင်းဘီရှည်တွေကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တာ ထိုးထိုး ထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးပဲ ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတော့တယ်။ ဘာလူမျိုးလည်းတော့မသိဘူး ထွားကြိုင်းသန်မာပြီး အသားအရေကလည်း ညိုမောင်းလှသလို ရင်ဘတ်မှာလည်း အမွှေးနုလေးတွေက အပြိုင်းအရိုင်းပါပဲ။ သူ့ငပဲကလည်း အတွင်းခံ ဘောင်းဘီခါးစည်းကြိုးကနေ ကျော်ထွက်နေတယ်။ ကျွန်တော့် နောက်ကျောဘက်ကနေ တခစ်ခစ်ရယ်သံကြားရတာကြောင့် ပြန်လှည့် ကြည့်လိုက်တော့ ခဏနေက လူနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က မျိုးမျိုးကို ကလိနေပြီ အိပ်ရာပေါ်မှာ။ နှစ်ယောက်စလုံးအ၀တ်မရှိကြ တော့ဘဲ မျိုးမျိုးအပေါ် အဲ့ငနဲကတက်ခွနေတာ မြှောက်နေတဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်တွေကြားက ခရေပွင့်ကိုပြသနေသည့်အလားပါပဲ။ အဲ့ငနဲ အသွင်အပြင်က အဦးဆုံး ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့လူနဲ့အသွင်အပြင်အတူတူပဲ မုတ်ဆိတ်မွှေး ပါးသိုင်းမွှေးတွေနဲ့။ အာ…ကျွန်တော် မေ့သွားတဲ့ လှလှနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ အသံထွက်နေကြပါတယ်။
ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေးရိတ်ထားသော ခဏနေက ကျွန်တော့်ကိုနမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော့်ဆီပြန်ကပ်လာပြီး နောက်ဘက်ရှိ အိပ်ရာပေါ်ကိုတွန်းလှဲဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ လိင်တူဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးသလို အခုလို လိင်တူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို အောက်ကနေစေဖို့ကြိုးစားမယ်လို့လည်း အတွေးမ၀င်ခဲ့စဖူးပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကိုယ်လုံးကိုတွန်းခွာပြီး လွတ်မြောက်ဖို့နည်းနည်းတော့ကြိုးစားမိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုပဲကြိုးစား ကြိုးစား ထွားကြိုင်းတဲ့ သူ့ကိုယ်ကြီးနဲ့ အပေါ်ကဖိထားတာ အိပ်ရာထဲကိုမြုပ်တော့မတတ်ပါဘဲ။ ရုန်းကန်ရတာ လက်ပန်းကျသွားတော့ ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ထင်သလဲ ဟင်? မလှုပ်မရှား ခြေပစ်လက်ပစ်နဲ့ ငနဲကြီးလုပ်သမျှငြိမ်နေရတော့တဲ့အဖြစ်ကျရောက်သွားတာပေါ့။ သူတို့ကို မကြမ်းနိုင်တော့ သူတို့က ကျွန်တော့်ကိုကြမ်းတာကိုငြိမ်ပြီး ပြုသမျှနုရတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နံဘေးက အိပ်ရာပေါ်မှာလဲ မျိုးမျိုးတစ်ယောက် ငရဲရောက်နေသလားအောက်မေ့ရတယ် အသံစုံနဲ့အော်နေတော့တာ။
အိုး….စိုစွတ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ယောက်ျားခြင်းမနမ်းဖူးသော ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို အသည်းယားစဖွယ်တို့ထိစုပ်ယူလာပါတယ်။ သူ့လျှာနွေးနွေးကြီးကိုလည်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကြားကနေတစ်ဆင့် ထိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားပါသေးရဲ့။ သူ့လက်အစုံကလည်း ကျွမ်းကျင်လိုက်တာ လှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဘဲ ခဏငြိမ်နေမိတာနဲ့တင် ကျွန်တေ်ာ့အ၀တ်တွေကို ဆွဲချွတ်ပြီးပြီ။ မတိုမရှည် ကျွန်တော့်ဆံနွယ် တွေကို စုကိုင်လိုက်ပြီးနောက် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တဲ့ သူ့ပေါင်ခြံရှိရာကို ငုံကိုင်းစေပါတယ်။ ပက်လက်ဖြစ်နေရာကနေ သူဆွဲခေါ်ရာကို အလိုက်သင့်ပါလိုက်ရပေမယ့် ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့အတွင်းခံကိုငြိမ်ပြီးကြည့်နေမိတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အားမရလို့လားမသိ သူ့ဘောင်းဘီကို အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာ ၇လက်မနီးပါး သူ့ငပဲကြီးဟာ ခုန်ထွက်လာပါရော။ တုတ်လည်းတုတ်သဗျ လန့်တောင် လန့်တယ် လုံးပတ် ၃လက်မလောက်တောင်ရှိမယ်။ ဒါတောင် မမာ့တမာနဲ့ ဆီးစပ်ကခြုံပုပ်ထဲနည်းနည်းပုန်းနေသေးတာနော်။
‘လာစမ်းပါကွာငါ့ကောင်ရာ….-ုပ်ပေး’ ကျွန်တော် မ၀ံ့မရဲ တုန်နေသောလက်ဖျားတွေနဲ့ ပထမဆုံးထိကိုင်လိုက်တယ်။ နည်းနည်းကြမ်းသလိုထင်ရတဲ့ အသားချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကိုကိုင်ရသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းဖျားတွေနဲ့ မတို့ထိခင်မှာ သူ့ငပဲကိုကိုင်ပြီး ခဏတော့ ပွတ်သပ် ကစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်လျှာဖျားကို အသာထုတ်လိုက်ရင်း သူ့ငပဲဖျားကို တို့ထိကြည့်မိတော့ အရည်ကြည်အချို့ထွက်နေတာကို အရသာခံမိရော။ ကျွန်တော် လျှာကိုအပြားလိုက်ထုတ်ထားကာ သူ့ငပဲတလျှောက်ကိုပဲ လျက်ပြုကြည့်မိနေပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်းလေးကို အသာငုံကြည့်မိတဲ့ခဏ အဲ့လူက မပြောမဆို လျောကနဲဖိသွင်းချလိုက်တာ အော့အံပြီး အန်ထွက်မိတော့မတတ်ခံစားလိုက်ရတယ် လည်ချောင်းထဲအထိလေဗျာ။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး အသက်ကို၀၀ပြန်ရှူရှိုက်ရပါတယ်။
‘ဘာဖြစ်လို့လည်းကွ? -ီးတစ်ချောင်းကို မစုပ်နိုင်ဘူးလား….ကြည့်ရတာ မင်း…နည်းနည်းလေးအကြမ်းခံချင်တယ်နဲ့တူတယ်..’ သူက ကျွန်တော့်ကို ရစရာမရှိအောင်ပြောပြီး စိတ်ကို မခံချင်စိတ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ချင်ပုံပေါ်တယ်။ အလုပ်တော့ဖြစ်တယ်ဗျ စိတ်ကသာငြင်း ဆန်ချင်နေပေမယ့် လက်တွေ့က ကျွန်တော် သူ့ငပဲကိုပြန်ဆွဲကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲပြန်ထည့်မိပါရော။ ကျွန်တော့်လျှာဖျားနဲ့ သူ့ငပဲခေါင်းတစ်ဝိုက်ရစ်ဝိုက်လိုက်ပြီး စုပ်မျိုလိုက်တာ ‘အာ….yeah’ ဆိုတဲ့အသံကြားရပြန်တော့ ကျွန်တော့်လည်မျိုတွေ စိတ်တင်းကြပ် နေတာတွေကို အတန်ငယ် လွှတ်ချလိုက်ရင်းသူ့ငပဲ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲဖိဖိသွင်းလာတာကို လက်ခံပေးဖြစ်လိုက်တယ်။ ဒုတိယအကြိမ် သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲက ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်ရရင်း အထာပြန်ကျဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားရပြန်ပါရော။ တတိယအကြိမ်မှာ တော့ သူ့ငပဲခေါင်းကိုပဲ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက် လျှာကစားလိုက်ပဲ လုပ်မိပါတယ် ကျွန်တော့်သွားအစွယ်တွေနဲ့မငြိအောင်လည်း ကြိုးစား ရတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့် ကြိုးစားမှုကို ‘Yeah….-ီးစုပ်စမ်းကွာ…စိတ်ကြိုက်စုပ်….ကြီးတာကိုမင်းကြိုက်တယ်မဟုတ်လား….မင်းဖင် ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို သောက်ရမ်း-ိုးချင်နေပြီ….ဆက်စုပ်ကွာ..’ဆိုပြီး အားပေးအားမြောက်လုပ်တယ်။ ညစ်တီးညစ်ပတ်ပြောနေတဲ့ စကားသံတွေရယ် ကားရပ်နေတဲ့ သူ့ခြေနှစ်ချောင်းကြား ဒူးထောက်ပြီး -ီးစုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အခြေအနေတွေက စိတ်ထဲအရမ်းကြွလာ ကာ ပေါင်ကြားထဲက ကျွန်တော့် ညီဘွားဟာလည်း မာစပြုလာပါပြီ။ သူ့စကားသံတွေက အဆက်မပြတ်ထွက်နေသလို ကျွန်တော့်စိတ် တွေဟာလည်း ထန်သထက်ထန်လာကာ ကျွန်တော့်-ီးဟာလည်း စတီးချောင်းတစ်ခုလိုမာနေရော။ အဲတာကို သူသတိပြုသွားချိန်မှာတော့ အောက်မှာ ဆင်းရပ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ခြေအစုံကို ခုတင်စွန်းကိုရုတ်တရက် သူဆွဲယူလိုက်တာ ကျွန်တော် ပက်လက်ဖြစ်ကရော။ နောက် ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းအစုံကို အားရပါးရပြန်စုပ်နမ်းလိုက်ကာ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ခါးမှာရှိနေစဲ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို အကုန်ချွတ်ပေးတယ်။ မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့လက်ကြီးနဲ့ဆုပ်ကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက်ကစားပေးတာ အရည်ကြည် လေးတွေစို့ထွက်လာတာကိုမြင်မှ ရပ်ရော။ ကျွန်တော့်မျက်နှာအပေါ်နားဆီမှာတော့ လေးဘက်ထောက်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလူရဲ့ ဆောင့် ချက်တွေကို ခံစားနေတဲ့ မျိုးမျိုး ရင်သားကြီးတွေက ခါရမ်းနေတာမြင်ရတယ်။ အို….သူမ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကျွန်တော်စုပ်မျိုလိုက် တယ် တပြွတ်ပြွတ်ပေါ့နော်။ ကော့ကော့တက်သွားတဲ့ သူမခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းကလူကလည်း ကြမ်းသလားမမေးနဲ့။ အာ….စိုစိ စိုစိ ကရင်မ်တွေ ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာစိုစွတ်လာသလို ကျွန်တော့်ငပဲကိုပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ ခံစားမှုကိုရလိုက်တော့ ဘာပြောရမလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက မနေနိုင်စွာ အော်ညည်းလိုက်ရင်း သုက်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိပါတယ်။ ကောင်းကင်ပေါ်ကို ထိုးတက်သွားပြီး မြေပြင်ပေါ်ပြန်ဆိုက်ရောက်လာတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေါ့။
‘သွား….သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ဦး’ သူ့အော်ငေါက်သံကြားရတော့ အခုမှပြီးထားတဲ့အရှိန်နဲ့ လက်ဖျားခြေဖျား သာခွေရိုင်ဖြစ်ချင် နေတာကို ဂရုမပြုအား ရေချိုးခန်းဘက်လှမ်းမလို့တဘက်ကိုယူပြီး ခါးတစ်ဝိုက်ကိုသုတ်လိုက်မိစဉ်မှာတော့ ငနဲက ကျွန်တော့် ကို နောက်ကနေဆွဲခေါ်လိုက်ကာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်ရင်း ပွဲဆူနေတဲ့ မျိုးမျိုးတို့ရှိနေတဲ့ ခုတင်တိုင်တွေနား ပစ်ချလိုက်တယ်။ ကျောနဲ့ မွေ့ရာထိလိုက်ချိန်မှာပဲ မျိုးမျိုးရဲ့ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ် အော်ညည်းသံနဲ့အတူ အခြားငနဲတစ်ယောက် အပြီးသတ်နေတာ ကြုံလိုက်ရပါရဲ့။ ရှည်လျားတဲ့ငပဲကြီးကို မျိုးမျိုးပစ္စည်းထဲကဆွဲထုတ်လိုက်တာ သုက်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့ ကွန်ဒုံးကြီးနဲ့အတူ ဖွေးကနဲထွက် လာရော။ လှလှတို့အတွဲကလည်း ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာပြီး မလှမ်းမကမ်းက ဆိုဖာပေါ်မှာ လှဲနေကြတယ်ဗျ။ အိုး….ကျွန်တော့်ကို ကစားနေတဲ့ ငနဲက ကြိုးခွေအချို့ယူလာပြီး ခုတင်တိုင်တွေဘက် မျက်နှာမူစေကာ ကျွန်တော့်လက်တွေကိုချည်နှောင်ပါတော့တယ်။ ခြေထောက်တွေကိုပါ ခုတင်ခြေရင်းတိုင်တွေနဲ့ချည်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်မှာ မှောက်ရက်ကြီးဖြစ်ကရောလေ။ ကျန်တဲ့လူတွေက ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ပြီးနေကြပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ပွဲကို ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ သဘောဖြစ်နေတာကြောင့် နည်းနည်းတော့ ရှက်မိသလိုပါပဲ။ သူတို့တွေက ပရက်ရှိုးထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့အတိုင်းထင်ရတယ် ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှကိုပေါ့နော်။ မှောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ် သူခွတက်လာရင်း ခုတင်ဘေးစားပွဲပုလေးပေါ်က KY Jelly ဘူးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တင်သားဆိုင်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲ ဖြဲကာ ခရေ၀ကို စူးစမ်းပါတယ်….လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ကလိလိုက်…ထိုးသွင်း ပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်…အာ…အမျိုးမျိုးပဲ။
‘Holy shit….မင်းဟာက ကြပ်နေတာပဲ….အပျိုစင်လေးပေါ့လေ…ဟဲဟဲ…သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာ သိပ်မနာစေရပါဘူး’ သူ့ကြည့်ရတာ ကျွန်တော် နာကြင်မှာကို သိနေသလို ဘယ်လိုပြုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ အထာနပ်နေပုံပါပဲ။ ကျောတွန့်သွားမိတယ်….ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ စိုစွတ်နေတဲ့ လျှာကြီးက ကျွန်တော့ ခရေ၀ ဧရိယာတ၀ိုက်ကို လျက်ပြုလိုက်လို့ဆိုရမယ်။ အာ…ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး။ ခဏနေတော့ ခပ်မာမာတစ်ခု ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ သွေးတိုးစမ်းလာတယ်။ နည်းနည်းနာကျင်တဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိလိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ကို သူဘယ်လိုလုပ်နေသလဲဆိုတာကို မြင်ကြည့်ချင်သားပါ။
‘အင်း….မင်းက straight ဆိုတော့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလိုက်လျောရမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူး။ မင်း ဖင်တွေကို အသားကုန်ကြုံ့ထားတာကိုလျော့လိုက်….ပါးစပ်ဟပြီး အသက်ရှူထား….စိတ်ထဲဘာမှမထားနဲ့ကွာ….အိုကေ?’ သူ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကြိုးစားလိုက်ချိန်မှာတော့ ခပ်တုတ်တုတ်ငပဲခေါင်းဟာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲတိုးဝင်လိုက် ပြန်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေရော။ အာ…ကျွန်တော် ဘေးဘီကြည့်မိတော့ တခြားအတွဲတွေ ကိုယ်စီပြီးမြောက်သွားကြချိန် ကျွန်တော်အဖြစ်မရှိလို့ မပြီးသေးတဲ့ပုံဟန်ခံစားချက်ဝင်မိသလား ကောက်ချက်ဆွဲရမတတ် ကြိုးစားကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်သွားကရော။
“Fuck me.” ကျွန်တော် နုညံ့စွာတောင်းဆိုမိပါတယ်။
‘ဘာပြောတာလဲ….ဘာပြောလိုက်တယ်…မကြားရဘူး ကျယ်ကျယ်ပြောကွ’ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ညစ်တီးညစ်ပတ်စကားသံတွေထွက် လာတာကိုသူပိုကြားချင်ပုံပေါ်တယ်။
‘Fuck me!!!’ ကျွန်တော် ဘယ်သူမှမရှိဘူး ခံစားလိုက်ကာ ခပ်ကျယ်ကျယ်ပဲအော်ဟစ်တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ သူကလည်း ချောဆီသုတ် လိမ်းထားတဲ့ သူ့ငပဲကြီးကို ငါးလက်မလောက်ထိဝင်အောင် သွင်းချလိုက်တာ အပျိုစင် ကျွန်တော့်ခရေ၀ကွဲသွားသလားခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုရတဲ့အထိပါပဲ။ အသားကုန် ကျွန်တော် အော်ဟစ်လိုက်ပေမယ့် သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကဆွဲနှုတ်မသွားပါဘူး။ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်တွေ လှိမ့်ဆင်းကျကုန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ချက် အော်လေ သူ့ငပဲကို အဆုံးထိဝင်အောင် ဖိဖိသွင်းလေ လုပ်တာ အသံတွေတောင်မြည်ကုန်သလားထင်ရရော။ သူလုပ်ပုံက ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက အော်ဟစ်သံထွက်ထွက်လာတာကို သဘောကျတယ် အော်သံထွက်အောင် ပိုပိုကလိတယ်။ ခဏတာအချိန်ရလာတော့ သူ့ကစားကွက်တွေအောက် ကျွန်တော် အဆင်ပြေ ပြေဖြစ်လာတယ်လေ။ အစကတော့ စက်သေနတ်ပစ်သလို ကျွန်တော့်ကို -ိုးနေတာ….ကျွန်တော် ခေါင်းအုံးတွေကိုဆွဲညှစ်ပြီး အော်ဟစ် နေတာလည်းမြင်ရော သူ့ငပဲကို အသာလေးပြန်ဆွဲနှုတ်ဖို့လုပ်တယ်။
‘မင်း အော်သံကိုထပ်ကြားချင်တယ်ကွာ…မင်း ဘယ်လောက်ကြိုက်လဲဆိုတာပြောစမ်း’ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်တွေကို ဖျစ်ညှစ်ကာ မပြောပြောအောင် နှိုးဆွတယ်ဗျ။
‘Oh My God, I Love it. ခင်ဗျား -ီးကို ကျွန်တော့် -င်ထဲထည့်ပေးစေချင်တာ…အာ…သိပ်မဆွပါနဲ့တော့ဗျာ--ိုးပါတော့’ မိနစ်အနည်းငယ် ကြာပြီးနောက်မှာ နာကျင်နေတာတွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးလာကာ သာယာတဲ့ဖီလင်ကို ခံစားတတ်လာပါတယ်။ သူ့ငပဲကို အလိုက်သင့် အလျားသင့်လက်ခံဖို့နားလည်လာတယ်ဆိုပါတော့။ သူ ဆောင့်ဆောင့် -ိုးတိုင်း ကျွန်တော့်ငပဲဟာ နုညံ့တဲ့အိပ်ရာခင်းတွေ နဲ့ ပွတ်တိုက်နေတာကြောင့် နှိုးဆွမှုတစ်မျိုးအဖြစ်ခံစားရကာ ပြန်လည် နိုးကြွလာရပါတယ်။
‘အာ…..ကျွန်တော် ပြီးတော့မယ်…ပြီးတော့မယ်….Oh Shit’
‘သဘောကျ ပန်းထုတ်ပစ်စမ်း ဘေဘီ…ညစ်ပတ်မှာ စိုးရိမ်မနေနဲ့’ ကျွန်တော် မြင်တော့မမြင်ရပေမယ့် ခံစားလိုက်ရတာ အိပ်ရာခင်းတွေ ရွှဲသွားသလို ကျွန်တော့်ဗိုက်သားတွေလည်း စီးကပ်သလိုဖြစ်သွားရပါတယ်။ တော်တော့်ကိုများတဲ့ သုက်ရည်တွေကို ကျွန်တော် နေရာအနှံ့ ပန်းထုတ်ပစ်လိက်မိတာပါပဲ။ အဲ့အချိန် ကျွန်တော့် ခရေ၀ကြွက်သားတွေက ရှုံ့ပွရှုံ့ပွနဲ့သူ့ငပဲကိုဖျစ်ညှစ်တာကြောင့် သူ့အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းထန်လာသလို ဆောင့်သွင်းချက်တွေဟာလည်း မြန်ဆန်လာပါတယ်။ ခဏအကြာမှာတော့ သူ့ခြေဖျားတွေ တဆတ်ဆတ်ခါသွားသလို ကျွန်တော့်ကျောပြင်ပေါ်ကိုသူမှောက်ချလိုက်ကာ ငြိမ်သက်သွားရော။ သူ့ရဲ့ မပျော့တပျော့ ငပဲကို အသာဆွဲ ထုတ်လိုက်ပြီးနောက် ချည်နှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေကို သူဖြေပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ဘယ်လိုပြောရမလည်းမသိတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးကို ကောင်းကောင်းလေးအနှိပ်အနယ်ခံရပြီးနောက် အပိုဆောင်းအခြားရာလေးတွေကို ရလိုက်သလိုမျိုးပါ။ သူ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်တွေနဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ နမ်းရှိုက်တယ် ပြီးတော့ သူ့ငပဲခပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ခရေ၀ကို တဘတ်ဘတ်ရိုက်ကြည့်ပြန်သေးတာ။ အိပ်ရာခင်းက နုညံ့တာကြောင့်ရော သူ့ရင်ခွင်က နွေးထွေးတာကြောင့်ရော မအောင့်နိုင်ဘဲ အိပ်မောကျသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်အရင်က မိန်းကလေးတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖူးပါတယ်။ ဒီနေ့လောက် သုက်ရည်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် လောက်မထုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အိပ်ရာနိုးတော့ သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်မိတယ် အခြားသူတွေကို တွေ့မှမတွေ့ရတော့တာကိုး။
‘သူတို့ပြန်သွားကြပြီကွ၊ ဒီမှာ မင်းပစ္စည်းတွေ’ ကျွန်တော့် ပစ္စည်းတွေကို ခုတင်ခြေရင်းနားမှာ အပုံလိုက်စုစည်းပေးထားတယ်။ သူ့အသံက အရင်ထက် ပိုပြီး နုညံ့တယ် ညင်သာနေတယ်ဗျ။ ခဏနေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ကျွန်တော့်ကို လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူ မဟုတ်ဘဲ အခြားတစ်ယောက်လိုကိုဖြစ်နေတာ။
‘အင်း….တကယ်ဆို ခင်ဗျားနဲ့ အတူနေချင်သေးတာဗျ..ဒါပေမဲ့’
‘ဒါပေါ့…အ၀တ်တွေဝတ်တော့ ငါ မင်းကိုကားမောင်းပြီး လိုက်ပို့မယ်’ ကျွန်တော်အ၀တ်တွေအကုန်ဝတ်ဆင်ပြီးချိန်မှာတော့ သူ ကျွန်တော် ရှိရာကိုလှမ်းလာပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို ငြင်သာစွာအနမ်းချွေပါတယ်။ ‘ငါ့နာမည်က မင်းသိုက်….အဲ…မင်းသိချင်မလားပြောပြတာပါ’
‘ကျွန်တော့်နာမည်က ‘ညီဆက်ပိုင်’ပါဗျ။ အဲ…တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ အခုမှပြောရတော့မယ်’။ သူ သဘောတကျရယ်ရော။ နှစ်ဦးသား အ၀တ်လဲလှယ်ပြီး ပါတာအကုန်သယ်ဆောင်ကာ ကျွန်တော် သူ့ကားကိုစီးပြီး သူတည်းခိုရာဟိုတယ်ကိုလိုက်သွား ဖြစ်တယ်။သူက ကျွန်တော့်သဘောပါအောင် မလုပ်ဘဲ သူ့သဘောအတိုင်း လုပ်ခဲ့မိလို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ တောင်းပန်စကားဆိုပေ မယ့် ကျွန်တော်ကပြန်တုန့်ပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလေ။ သူ ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာကိုပဲ ကျွန်တော်က ကျေးဇူးတင်ရမှာ။ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ ဖုန်းကွယ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပြသဖော်ဆောင်ပေးတယ် ပြီးတော့ ဝေငှခွင့်ပေးခဲ့တာကိုး။ ကျွန်တော် ဒီမြို့က မထွက်ခွာခင် အလည်အပတ်ခရီးဆုံးတဲ့အထိ ကျွန်တော်သူနဲ့အတူ ညတွေကို အချိန်ဖြုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီ E-mail လိပ်စာတွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ လဲလှယ်ကြတယ် တစ်ယောက်လိုအပ်ရင် တစ်ယောက်ကဆက်သွယ်ဖို့မှာကြတယ်။
ခရီးစဉ်ကပြန်ရောက်ပြီး တစ်လ နှစ်လလောက်အကြာမှာတော့ ကျွန်တော့်ဘော့စ်ရဲ့သမီးနဲ့ လပ်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘ၀ အသစ်တစ်ခုနဲ့ ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ဆိုတာတွေကို ပြောပြဝေငှဖြစ်သလို အခြားသောကိစ္စတွေကိုလည်း ကိုမင်းသိုက်နဲ့ပြောဖြစ် ပျော်ရွှင်မိပါရဲ့။
အင်း….အခုတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ ငြီးငွေ့ချိန်မရှိ ….။ ။
Alex Aung (2 Sep 2014)
Note: ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်သိပ်မရှိပေမယ့် သူငယ်ချင်းတို့အပျင်းပြေပေါ့နော် အားပေးပါဦးလို့…
Posted by Alex Aung at 3:25 PM
အစ်ကို Alex ရေ .... ဖြစ်နိုင်ရင် စစ်တပ်ထဲက army gay ပုံစံ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးပေးပါလား။ senior တစ်ယောက်က junior တစ်ယောက်ကို ဒါမှမဟုတ်.. 3some လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
Side-Effects Of Party Drugs